« Miseho ny nafenina » -
AccueilTresaka« Miseho ny nafenina »
« Miseho ny nafenina »
16/05/2018 admintriatra Tresaka 0
Korontana tsy nifankahitana teo amin’ireo andian’olona teo amin’ny 13 mey, omaly. Ny sasany milaza fa tsy nomena ny karamany. Ny hafa mitaraina fa vola kely 1 000 ariary na indraindray 6 00 ariary no mba azony mandritra ny iray andro. Ny olona hafa kosa mitaraina nohon’ny fivadiham-pitokisana mety hihatra aminy satria nomena toky fa rehefa vita ny tolona dia omena asa, kinanjo amin’izao dia nolazaina fa efa misy olona 200 lahy sy vavy hafa mihitsy hasolo azy ireo any ambadika any. Mazava izany fa misy resa-bola tsy mazava mandehandeha eo amin’io hetsika etsy amin’ny 13 mey io. Na ry zareo samy zareo aza tsy mifampatoky matoa vaky eny anivon’ny haino aman-jery toy izao ny resaka.
Miharihary arak’izany fa ireto Mapar sy Tim ireto no tena mpividy olona , rehefa manao hetsika tahaka izao kanefa dia pingampinga ery manendrikendrika ny mpifanandrina aminy amin’io resaka io. Sady ny zava-doza dia mbola fitahina amin’ny fampanantenana poak’aty ny vahoaka madinika. Inona moa no asa azon’izy ireo omena an’ireto andian’olona 200 ireto ? Ny ankamaroan’ny orinasa aza mikasa hanakatom-baravarana noho ilay hetsika hataon’izy ireo.
Manomboka miseho ny nafenina.Vaky am-batolampy ny resaka. Manjaka eny an-kianja izany ny resa-bola matoa mivoaka toy izao ny resaka. Midradradradra ho miady amin’ny kolikoly sy hanafoana ny kolikoly anefa ireto depiote ho an’ny fanovana ireto , kanefa ny eo an-tokontaniny aza maloto tsy voafafany. Apetraka aminy ny fanontaniana hoe vola avy aiza no hanakaramany an’ireo andian’olona 200 lazaian fa “andrimaso” ireo ? Raha milaza azy ho miady amin’ny kolikoly marina ry zareo, dia ny tsara indrindra dia tokony hatomboky ny Bianco any amin’ireto depiote 73 ireto aloha ny fanadihadiana, satria efa “miseho ny nafenina”.